Fastboot Firmware Mi Devices – Hein Htet Kyaw
ကျွန်တော် အရင်က ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Bootloader Unlock Mi5s ရဲ့ အဆက်ပေါ့ မဟုတ်လဲ ဒီ Post ဖြစ်အောင်ရေးလိုက်ရတဲ့ Post အကြောင်းပေါ့လေ။ အရင်ဦးဆုံး Download Fastboot Rom Download မှာ ကိုယ့် ဖုန်းနဲ့ ကိုက်မယ့် Rom ကိုရွေးဒေါင်းလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ MIUI ROM Flashing Tool လေးကိုဒေါင်းပြီး Install လုပ်မယ်ပေါ့။ လုပ်လို့ပြီးသွားရင်တော့ Flashing Tool လေးကိုဖွင့် Select မှာတစ်ဆင့် ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ zip file Direction ကိုရွေးပေးရမှာပါ။ zip ကိုဖြည်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ 7zip ပါပဲ။ zip ဖြည်နည်းကိုတော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး ဆိုပေမယ့် အရင်ဆုံး tar file ကိုဖြည်ပါ ပြီးမှ အထဲမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဆက်ဖြည်ရမှာပါ ဖြည်လိုက်ရင်တော့ အောက်က အတိုင်းရလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတာက File Name အရမ်းမရှည်အောင် တိုတိုလေးပဲဖြစ်အောင် Rename ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တောကတော့ Mi5s ဘာညာဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်
File လဲဖြည်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ XiaoMiFlash Tool ကိုဖွင့်ပြီး Select မှတစ်ဆင့် ဖြည်ခဲ့တဲ့ Fastboot Rom Files Direction ကိုရွေးပေးရမှာပါ ရွေးပေးတဲ့နေရာမှာ Images ဆိုတဲ့အထိရွေးစရာမလိုပဲ အဲဒီ အပေါ် Direction အထိပဲရွေးပေးရမှာပါ
ပြီးရင်တော့ Ok ပေါ့ဗျာ အဲဒီပြီးရင်တော့ Phone ကိုပါဝါပိတ်ပြီး Volume Down Key နဲ့ Power ကိုဖွင့်ထားပြီး Fastboot Logo လေးပေါ်လာတဲ့ အနေအထားနဲ့ Computer ကို Cable ချိတ်ပေးရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ XiaoMiFlash Tool မှာ Refresh ကိုနှိပ်ပြီး Computer Detect ဖြစ်မဖြစ်ကို စစ်ကြည့်ရပါမယ်
အဲဒါပြီးသွားရင်တော့ XiaoMiFlash Tool မှာ Flash လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီး ၅ မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်အတွင်း စောင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Result အောက်မှာ success ဆိုပြီးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြပေးပြီး ဖုန်း Reboot ကျသွားတဲ့အဆင့်မှတစ်ဆင့် Device အသစ်ကို Setup ပြန်လုပ်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီမလို့ … အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး Fastboot ကနေ Firmware တင်တဲ့အကြောင်းကို ဒီမှာတင်ပဲရပ်လိုက်ပါတော့မယ်ဗျာ။
ဒါကိုရေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကလဲ ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်လို့ရသလို အကိုတစ်ယောက်ကို ကူညီချင်လို့ရေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ ပျက်သွားမှာ ကြောက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ။ ကွန်ပျူတာဆိုတာက ကလိဖို့ပါ ကလိသာကလိပါ ပျက်သွားရင် မနိုင်တဲ့အဆုံး ဆိုင်တွေပြလို့ရပါသေးတယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာ ဆိုင်ကို ပိုက်ဆံလွယ်လွယ်ပေးလိုက်ရသလိုဖြစ်တာကိုတော့ကျွန်တော်လဲ သဘောမကျသလို Hardware ဖြစ်တာကလွဲရင် ကျွန်တော် Software Problem တွေ Error တွေကိုတော့ Google မှာရှာလိုက် ပြင်လိုက် ရသွားတော့ Note တစ်ခုအဖြစ်သိမ်းထားလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ထိုင်နေလို့တော့ ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ထသွားမှ ကျိုးမှန်းသိတာတွေလဲရှိကောင်းရှိတတ်တာမို့ တတ်သိနားလည်တဲ့လူတွေကို အနည်းငယ်သာမေးပြီးတော့ Google ကိုအများဆုံးမေးပြီးဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပါလို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ xD
မကလိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ရင်ဘာမှလဲ သိလာမှာမဟုတ်ဘူး။ များများကလိ များများပျက်လေ များများသိလေပါပဲ
nyein chan aung 1 year ago	 Reply
bro. I can not be found the link . I have problem Mi account lock down and forget password. Kindly help me bro thank you
Hein Htet Kyaw Post Author 1 year ago	 Reply
Did your device locked or unlocked ?